菰野町（こものちょう） | to me motto!!（トゥー・ミー・モット）
युनोयामा ओन्सेन धेरै प्राकृतिक सुन्दरले बरिपूर्ण छ ! यहाँ सबै मौसममा भ्रमण गर्न जान सकिन्छ ! यहाँ चराको आवाज सुननसकिन्छ !
यो गाडी मोटर रेल विद बाद को सहर देखि कहिले काहीयस्तो बन जंगल मा गुमन जाउ खाले सोच छ बने यो ठाउँ मा जादा राम्रो हुन्छ !
यहाँ सुन्दर खोला , छ भाबेक्यु गर्न सकिन्छ ! केबुल कार्ड चादन सकिन्छ ! साथीहरुलाई यहाँ देखि केहि चिनो लेइदिन सकिन्छ ! केबुल कार्ड चादन २४०० रकम लाग्छ ! एकिको छेउमा ठाउको बारेमा बतैदिने मान्छे बएको हुनाले तेहा केहि जांन मन लागेको कुरा सोदना सकिन्छ !
तेहा दुर्बिन्ले सहर हेर्ननीसकिन्छ ! सहर रातिमा हेर्दा जिलिमिली देखिन्छ ! तेहा मन्दिर नि छ ! युनोयामा ओन्सेनमा गुमन जाने मान्छे देरै बएको हुनाले तपैले नि यो मौका नागुमयेर यक्पतक गुमन जादा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ! म त गैसके अब तपैहरुको पालो !